I-Blockstack: Umthombo Ovulekile We-Computing Platform | Kusuka kuLinux
I-Blockstack Kuyinto a ipulatifomu yamakhompiyutha ehlukanisiwe de «Código Abierto», okubandakanya phakathi kwezinto eziningi, okuvumela ukwenziwa kwe- izicelo ezinikezwe amandla, futhi unikeze izivumelwano ezisetshenzisiwe ngokufakazela ubuqiniso, ukugcina idatha nokusatshalaliswa kwesoftware.
Futhi, ngaphakathi I-Blockstack kufaka phakathi ukusetshenziswa kokuqala kwe-a Uhlelo oluhlukanisiwe lwe-DNS kusekelwa ubuchwepheshe «Blockchain» (Isizinda semininingwane seBlockchain)Ukuqaliswa kokusebenza kuhlanganisa ukusebenza kwe-DNS kanye nengqalasizinda eyisihluthulelo yomphakathi, okuhloswe kakhulu ukuthi isetshenziswe yizinhlelo zokusebenza ezintsha ezisezingeni eliphansi ku- «Blockchain».
I-Blockstack kungukuthuthukiswa «Código Abierto» eyenziwe iqembu lonjiniyela nabaphenyi abavela kuzo zombili izimboni nezifundiswa. Yenzelwe ukuba ibe yinhle inethiwekhi yekhompiyutha esetshenzisiwe ngokukhula nokusebenza uhlelo lwezinto eziphilayo. Okuzoba nezabo amalungelo edijithali ivikelwe ngokufanayo «Blockchain» lapho bezosebenza khona.
Ukudalwa kwe I-Blockstack Futhi ibinemvelaphi yokugqugquzela, ukukhathazeka okujwayelekile nokwomhlaba jikelele, mayelana ubumfihlo, ukuvikeleka futhi kaningi ukwephulwa kwedatha, okunikezwe ngomhla ka- Internet, ikakhulukazi ezikhathini zamuva.
Ngenxa yalokho, abathuthukisi be-software balokhu ipulatifomu yamakhompiyutha ehlukanisiwe sebenzisa okufanayo ukwakha izindlela ezihlukanisiwe izinsizakalo ezidumile ezivame ukubhekwa njengezingaphephile, phakathi kwezinye izinto eziningi, ngengxenye enkulu ye- abasebenzisi bomhlaba jikelele.
1 I-Blockstack: ipulatifomu yekhompiyutha ehlukanisiwe
1.2 Izicelo ezifakiwe
I-Blockstack: ipulatifomu yekhompiyutha ehlukanisiwe
Phakathi kwezici eziphawuleka kakhulu ze- I-Blockstack Yilezi:
Ukunikezwa a i-ecosystem yezicelo ezizimele neziphephile lokho kubeka abasebenzisi ukuthi baphathe idatha nobunikazi babo ngokwakhiwa.
Ikuvumela ukuthi udale kalula izinhlelo zokusebenza ezisatshalaliswa kakhulu ku-blockchain.
I-Akhawunti nge ngaphezu kwezicelo ezingama-300 ezakhiwe ukuthi abakwazi ukuguqula noma ukudlulisa idatha yomsebenzisi ngaphandle kwemvume yabo.
Kwenza umqondo we i-inthanethi entsha, evumela abathuthukisi benethiwekhi ukuthi bakhe i-Intanethi engcono, esezingeni eliphansi, kanye nabasebenzisi benethiwekhi ukugcina ukulawula kwedatha yabo nobumfihlo.
Iphethe ithokheni, ebizwa Izitaki (STX), esisatshalaliswa ngokugcwele phakathi kwabasebenzisi abaphezulu beNethiwekhi, okuzoba yimpahla yomdabu yenethiwekhi entsha nethuthukisiwe eyakhiwe ku-Stacks blockchain.
Ulwazi oluthe xaxa ku I-Blockstack ingatholakala endaweni yayo yokugcina ku- GitHub.
Phakathi kwe Izinhlelo zokusebenza eziyi-10 ezisatshalaliswe kakhulu, idaliwe kuze kube namuhla, ku- ipulatifomu yamakhompiyutha ehlukanisiwe de «Código Abierto» Yilezi:
pDriver: Inikeza ngesistimu yokugcina eyimfihlo ebetheliwe.
Amamephu we-Arcane: Inikeza enye indlela kuGoogle Maps, kepha ngobumfihlo bangempela.
I-Dmail: Ikuvumela ukuthi usebenzise insiza ye-imeyili ngaphandle kweseva emaphakathi.
Isithombe Vault: Kwenza kube lula ukugcina izithombe zethu zivikelekile ngokubethela kokuphela kokuphela, izici ezinhle zokuhlela, nokugcinwa kwamahhala okungenamkhawulo.
Ikhalenda Eliphephile: Kwenza kutholakale ikhalenda elihle eliphephile nelikhululekile, elibethelwe kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni futhi lihlonipha ubumfihlo bethu.
satshi: Isekela uhlelo lokudlulisa bukhoma ngokuxhaswa kokusetshenziswa kweBitcoin ukuqinisekisa ukwenza imali ngokuqukethwe komsebenzisi.
I-MyPodium: Inikeza ipulatifomu yomsindo yokwabelana ngamazwi ethu nemiyalezo, futhi sithole imibono ngayo.
Umbhalo womoya: Isekela ipulatifomu ye-Blogging eyabiwe ngokuphelele, evulekile, evikelekile nengavunyelwe.
Ama-Dclouds: Inikeza enye i-Apple's iCloud ngokuya nge-blockchain.
Imibhalo ye-Arcane: Inikezela ngenye indlela ku-Google Amadokhumenti ka-Google ngokususelwa ku-blockchain.
Uma ufuna ukubabona bonke bebaliwe, finyelela kusixhumanisi sewebhu esilandelayo: Izinhlelo zokusebenza zeBlockstack
Sithemba ukuthi ukhona "okuncane kodwa okuwusizo" ngalokhu okuhle kakhulu «plataforma informática descentralizada de código abierto» kubizwa «Blockstack» lokho kusivumela, phakathi kwezinto eziningi, ukudala izinhlelo zokusebenza ezisatshalaliswa, ezinentshisekelo enkulu nokusetshenziswa, kukho konke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Blockstack: Ipulatifomu Yomthombo Ovulekile Esetshenziselwe Ukusetshenziswa
I-Savannah: Isistimu Yokusingathwa Kwamahhala Yesoftware